रहस्यमय गिरफ्तारी: अवैध भारु कारोबारी अन्सारीको 'कराँची' कनेक्सन | Citizen Post News
काठमाडौं । शुक्रबार विहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ७ करोड ६७ लाख ९४ हजार भारतीय नक्कली रुपैयाँसहित तीन पाकिस्तानी नागरिक पक्राउ परे । पाकिस्तानी नागरिक नादिया अनवर, नासिर उद्दिन र अख्तर महोम्मद पक्राउ परेको केही क्षणमै उनीहरुलाई लिन त्रिअवि आइपुगेका नक्कली मुद्राका कारोबारी तथा नेशनल टेलिभिजनका पूर्वसञ्चालक युनुस अन्सारी, उनका साला सयल खान र सवारी चालक सुदन रानाभाट पक्राउ परे । पक्राउ परेका तीनै जना पाकिस्तानी कराँचीका हुन् ।
अन्सारी यसअघि पनि खोटाचलन र आलूऔषध मुद्दामा जेलमा सजाय काटिसकेका ब्यक्ति हुन् । स्रोतका अनुसार उनी जेलमै रहेका बेला भारतीय नक्कली मुद्रा काण्डमा समातिएका पाकिस्तानस्थित कराँचीका अब्दुल रफाकसँग भेट भयो । त्यतिबेला, पाकिस्तानी नागरिक अब्दुललाई नेपालको जेलबाट बाहिर निकाल्न अन्सारीले जेलबाटै सेटिङ मिलाए । दुभाग्र्य उनले गरेको सेटिङले फेल खायो । सेटिङका दिएको रकम फिर्ता पनि भएन । त्यसो हुँदा अब्दुलसँग उनको सम्वन्ध चिसियो । त्यसपछि पाकिस्तानी नागरिक अब्दुल आफ्नै बलबुताले जेल मुक्त भएर पाकिस्तान फर्किए । तत्पश्यात, अब्दुल र अन्सारीबीचको सम्वन्धमा दरार आएको बताइन्छ ।
उता अवैध मुद्राका कारोबारी अन्सारीलाई तीन जना पाकिस्तानी मित्र नेपाल आइरहेको र उनीहरुलाई काठमाडौंको होटलसम्म सुरक्षित पुर्याउन आग्रह गर्दै युनुसलाई उनै अब्दुलको फोन आयो । अन्सारीले अब्दुलको कुरालाई नकार्न सकेनन्, त्यसपछि अन्सारी स्वयम् उनीहरुलाई लिन शुक्रबार विहान त्रिअवि पुगेको बताइन्छ । प्रहरीको विशेष ब्यूरो र अपराध महाशाखाको अनुसन्धानबाट पनि अब्दुलले नासिर र अन्सारीलाई फोन सम्पर्क गरेको देखिएको छ । अब्दुल तिनै ब्यक्ति हुन् जो अन्सारीसँग रुष्ट थिए । नासिर तिनै ब्यक्ति हुन् जो भारतीय अवैध मुद्रा बोकेर नेपाल आएका थिए । यि दुवै जनासँग कराँचीका अब्दुलको फोन सम्पर्क देखिएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ ।
(भारुसहित पक्राउ परेका नासिर र अन्सारी त्रिअवि कक्षमा पक्राउपछि)
अन्सारीले पक्राउ परेपछि अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरी अधिकृतलाई भनेका थिए, ‘यो मुद्दासँग मेरो लेनादेना छैन । तर मलाई यही पेशाका ठूला खेलाडीले फसाएका हुन् । मलाई त तीन जना पाकिस्तानी नेपाल आइरहेका छन् । उनीहरुलाई होटलसम्म पुर्याएर राखिदिनु भन्दै अब्दुल भन्ने पाकिस्तानीले फोन सम्पर्क गरेका थिए । त्यसैले म त्रिअविमा उनीहरुलाई लिन आएको ।’ अन्सारीले भने झैं अब्दुलले फोन सम्पर्क गरेको उनको मोबाइलबाट देखियो । जबकि भारतीय अवैध रकमसहित नेपाल आएका नासिरको पनि अब्दुलसँग नै फोन सम्पर्क भइरहेको थियो ।
तिनै नासिरलाई प्रहरीले रित्तो झोलासहित त्रिअवि बाहिर निकालेर उनकै मद्दतले अन्सारी, उनका साला र सवारी चालकलाई पक्राउ गर्न सफल भयो । अन्सारी सजिलै पक्राउ परेपछि विभिन्न शंका-उपशंका उब्जिरहेको छ । सायद अन्सारीले दिएको तर्क पनि साँचो हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ । यद्यपि उनी नक्कली नोटका कारोबारी हुन भन्नेमा कुनै दुविधा नभएको स्रोतले जनायो ।
ढाका टोपी निधारमाः
नेपाली ढाका टोपी लगाएर त्रिअवि पुगेका अन्सारीले पक्राउपछि अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरी अधिकृतसँग कुराकानी गर्दै भनेका थिए-‘अब के नै बाँकी छ र सर मैले मास्क लगाउन ? सवैलाई थाहा छ कि म फेक करेन्सीको काम गर्छु । मैले किन मास्क लगाउनु पर्यो र ? तर यो मुद्दामा चाहिँ मलाई फसाइएको हो । करोडौं भारतीय नक्कली रुपैयाँ आउँदै छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै नत्र म आफै किन त्रिअविमा आउँथे र ?’
ति प्रहरी अधिकारीलाई उनले थप भने,‘यो मुद्दाबाट अब मलाई जेल त हाल्छ नै । अर्को कुरा पटक-पटक ज्यान मार्न कोशिस गर्दै आएको शक्तिले मलाई मार्न पनि सक्छ । अब म आत्तिनु वा डराउनुमा कुनै तुक छैन । दुईमा एक हुने नै हो । त्यसैले मैले मास्क नलगाउने निर्णय गरेको छु ।’ हुन पनि अन्सारीले भनेझै पत्रकार सम्मेलनमा कुनै मास्क पनि लगाएनन् ।
केही डिमोरलाइज देखिएका अन्सारीको दुवै हातमा हत्कडी लगाइएको थियो । दुवै हातमा हत्कडी लागेको पनि उनले दुई हातको विचमा पानीको बोतल समाति राखेका थिए । पत्रकार सम्मेलन अवधिभर केही डराएजस्तो अनुहार देखिए पनि उनी मुस्कुराई रहे । झुस्स दारीले उनले उनी थकित देखिए । उनको निधारमा नेपाली ढाका टोपी रहिरह्यो ।
झण्डै ८ करोड नेपाल पठाउने को थिए ?
उता पाकिस्तानबाट करोडौं अवैध भारुसहित तीन जना पाकिस्तानीलाई नेपाल पठाउने अब्दुल रफाक र महम्मद मुसा भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । उक्त गिरोहका लागि नेपालमा क-कसले काम गरिरहेका छन् ? त्यसबारे पनि प्रहरीले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
किनकी पक्राउ परेका तीन पाकिस्तानीले सो रकम काठमाडौं हुँदै पर्यटकीय नगरी पोखरा पुर्याउने योजना बुनिरहेका थिए । तर त्रिअवि सुरक्षार्थ खटिएको प्रहरी, भन्सार कार्यालय, अपराध महाशाखा र विशेष ब्यूरोको संयुक्त समन्वय र अपरेशनले करोडौं नक्कली भारु रकमसहित तीन पाकिस्तानी पक्राउ मात्र परेनन्, उनीहरुलाई लिन त्रिअवि पुगेका तीन जना नेपाली पनि समातिए ।
त्यसो त, अन्सारीले आफूलाई फसाउने षड्यन्त्रमा उनीसँगै नक्कली मुद्राको कारोबार गर्ने उनका पूर्वपार्टनर प्यासी भन्नेमथि शंका गरेका छन् । अन्सारीका अनुसार उनले नै भारतीय गुप्तचरी संस्था ‘रअ’ लाई सूचना दिएर नेपाल प्रहरीमार्फत पहिलो पटक उनलाई पक्राउ गर्न लगाएका थिए । अन्सारीलाई पक्राउ गर्न लगाएर उनको करिब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति प्यासीले झ्वाम पारेका थिए । यो कुरा अन्सारी स्वयम्ले त्रिअविभित्र अवैध भारुको गन्ने काम भइरहँदा भन्न भ्याएका थिए ।
त्यसो त, एक दैनिकका अध्यक्षले अन्सारी जेलमा रहेका बेला उनको श्रीमतीलाई फकाएर कागज गर्न लगाई एक रुपैयाँ पैसा नदिइ नेशनल टेभीको सामान लगेको पनि उनले बताएका थिए । अन्सारी सवैसँग खुलेरै बार्ता गरिरहेका थिए । त्यतिबेला नै अवैध भारुको गन्ने काम दुई घण्टा बढी समय लागेर सकियो । त्यसपछि उनीहरुलाई पत्रकार सम्मेलनका लागि महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय, रानीपोखरी लगिएको थियो ।
को हुन् युनुस ?
अन्सारी बाराका पूर्वमन्त्री तथा एमाले नेता सलीममियाँ अन्सारीका छोरा हुन् । पहिलो पटक उनलाई प्रहरीले खोटाचलन र लागूऔषध मुद्दामा पक्राउ गर्नुअघि उनी नेशनल टेलिभिजनका सञ्चालक थिए । नेपालको हरेक फेक करेन्सी काण्डमा प्रायजसो उनको नाम जोडिने गरेको छ । अन्सारी कुस्ती खेलाडी संघका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन् । गत ०७४ साल फागुन २ गते उनी जेलबाट छुटेका थिए ।
जेलबाट छुटेको एक बर्षपछि फेरी उनी सोही मुद्दामा पक्राउ परेका छन् । उनलाई ०६७ फागुन २६ गते कारागारभित्रै गोली हानेर हत्या गर्ने प्रयास भएको थियो । भाडाका भारतीय सुटर जसजित सिंहले उनलाई जेलभित्रै पुगेर मार्ने प्रयास गरेका थिए । अनुसन्धानका क्रममा भारतीय अण्डरवल्र्डका डन बब्लुश्री वास्तवले उनलाई मार्न पठाएको रहस्य सार्वजनिक भयो ।